nlg insurance company ltd(nlg insurance company ltd)
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांस प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको माघ १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आ.व २०७७/७८ का लागि १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०। ५२६३ प्रतिशत नगद लाभांस गरी कुल १०.५२६३ प्रतिशत लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित...
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका सीईओ दिप प्रकाश पाण्डे र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ सुनिल बल्लभ पन्त संविधान दिवसका अवसरमा विभुषित भएका छन् । संविधान दिवस २०७८ का अवसरमा पाण्डे र पन्तलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपनि विद्यादेवि भण्डारीले प्रबल जनसेवाश्री बाट विभुषित गरेकि हुन् । बीमा क्षेत्रमा...
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक सेयर आज(भदौ २२ गते)देखि लिलामीमा राखिएको छ । कम्पनीकी सेयरधनी करुणा राणाले आफ्नो नाममा रहेको १३२६.६० कित्ता संस्थापक सेयरहरु बिक्री गर्ने इच्छा राखि निवेदन दिएकाले उक्त सेयरहरु बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । सेयरको न्यूनतम मूल्य...
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल सुनचाँदी ब्यवासायी महासंघबीच बीमा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । कम्पनी र महासंघबीच सरल र सहजरुपमा बीमाको काम गर्ने बिषयको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा नेपाल सुनचाँदी ब्यवासायी महासंघकाका तर्फबाट अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य र एनएलजी इन्स्योरेन्सका तर्फबाट...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको बीमाशुल्क आर्जन ४९.६३%ले बढ्यो, मुनाफा २५ करोड बढी
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा ८९ करोड ५६ लाख ३ हजार रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४९.६३ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन ५९ करोड ८५ लाख २३ हजार रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानी कर्जा तथा...
एनएलजी इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारण सभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको असार २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको १५ औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको हो । बैठकले आगामी साउन २१ गते बिहिबारका दिन काठमाण्डौ पानीपोखरीमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा भर्चअल माध्यमबाट सभा आयोजना गर्ने निर्णय...
बीमा व्यवसायमा फड्को मार्दै एनएलजी इन्स्योरेन्सले आर्जन गर्यो २ अर्ब कुल बीमाशुल्क
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बीमा व्यवसायको आफ्नो १४ वर्षे यात्रामा पहिलोपटक २०० करोड(२ अर्ब) रुपैयाँबराबरको कुल बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीका अनुसार असार १९ गतेसम्ममा कम्पनीले रु. २ अर्ब रुपैयाँबराबरको कुल बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको हो । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले पछिल्लो समय आफ्नो...
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांस प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको जेठ १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आ.व २०७६/७७ का लागि १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०. ५२६३ प्रतिशत नगद लाभांस गरी कुल १०.५२६३ प्रतिशत लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांसमा...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको खुद मुनाफा ३५.२२%ले वृद्धि, बीमा कोषको आकार १ अर्ब बढी
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ८५ करोड ३६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खुद बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६.२५ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन ६२ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानी कर्जा तथा...